pamusoro 10 Easy Tips For Train akatasva Smart Kwose | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > pamusoro 10 Easy Tips For Train akatasva Smart Kwose
pamusoro 10 Easy Tips For Train akatasva Smart Kwose
chitima mari, Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Matipi
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 24/04/2020)
Vatariri nechitima kunogona kuva chimwe chezvinhu yokumbofaranuka uye kunakidzwawo nzira kuti famba. Unofanira kuziva kuti zvakanakisisa rwendo rwenyu uye muve ngwara. Kuva zvakanaka vakarongeka uye achiziva zviri kuitika refu nzira kune nokuita kwako chitima rwendo ari anoratidza dzenyu zororo kana ushingi. Tora Kutarira izvi Top 10 Easy Tips nokuti Train akatasva Smart. Iva wakagadzirira kwako rwendo inotevera.
pamusoro 10 Easy Tips nokuti Train akatasva Smart – ZANO ONE: Buy Ticket Your In Advance
pamusoro 1 kuti Top 10 Easy Tips nokuti Train akatasva Smart, Ivai nechokwadi kuronga rwendo wako uye kutenga rako chitima matikiti pachine kuti chokwadi iwe kuwana pamusoro zvitima uchida. Iva nechokwadi kuti abvunze chero Specials kana discounts kuti zvingave yauinayo. Ndiani asingadi rokuponesa vamwe mari! Iwe uchagona kunze zvishoma mari kupedza pane dzimwe rwendo rwenyu.
Milan kuna Naples Zvitima
Florence kuna Naples Zvitima
Bari para Naples Zvitima
Rome kuna Naples Zvitima
Mukadzi ari Train Station
ZANO MBIRI: Stow mikwende Your
Yakanakisisa Easy Tips nokuti Train ndechokuti Haufaniri nguva dzose tinofanira kuongorora yenyu zvikwama uye kana vari munhu anonzwisisa saizi unogona kusarudza kuti kuzvichengeta rack pamusoro chigaro kana the wedge muvira mativi nzvimbo pakati shure-to-musana zvigaro. nzira iyi mune mabhegi ako pedyo nemi nguva dzose.
Messina kuna Palerme Zvitima
Syracuse kuna Palerme Zvitima
Sisiri kuna Palerme Zvitima
Catane kuna Palerme Zvitima
ZANO RECHITATU: Iva Smart With Bags Your
Hatisi kutaura kuti chitima ose ane mbavha neanoda panguva mukana wokutanga vanowana, asi zviri nani kuva pamusoro njodzi divi. Kusvinurira kana totaura mabhegi ako. Munovachengeta njere pane panopera chitima motokari. Kana uine mukwende uchigonawo changed anosungira dzako penhumbi pani kuti zvimwe akachengeteka.
Milan kuna nokuTurin Zvitima
Lake Como kuna nokuTurin Zvitima
KuGenoa kuna nokuTurin Zvitima
Parma kuna nokuTurin Zvitima
ZANO RECHINA: Find Seat Your
Kana iwe akashandisa yedu yapfuura Easy Tips kuti Train pakufamba uye vane akachengetera chigaro imi mose arongwe. Unogona vanoenda kunzvimbo yako. Kana zvisiri, munogamuchirwa vachitora chero zvakakwana chigaro. Kana pane asina zvakawanda izvi zvinowanikwa, tarisa kuchengetedza Tags akagadza pamusoro pezvigaro kana mupanda mikova. The Tags vanoratidza tatamuka rwacho kuti chigaro iri rose wakawandirwa nokuda. Vanoratidzawo kana uri kuwana kure pamberi muridzi kunyange anowana pamusoro wakasununguka kutora kuti chigaro.
ZANO SHANU: Shandisa Train Time Nokuchenjera
Tora mukana kushandisa nguva yakawandisa nechitima rwendo kuti pachako akarongeka. Unogona kuronga yako inotevera rwendo. Shandisa nguva iyi kuti kuverenga bhuku rako, ongorora nzira yenyu inotevera rwendo. Enda kuburikidza mapikicha enyu, ronga yenyu mukwende, kaviri ongorora kubatana kwenyu kana kupedza mabasa chero unofanira muchine nguva. Kana rwendo wako refu uyu zvakare akanaka mukana kutora mune zvimwe zvinotyisa.
Lyon Airport kuenda kuNice neTreni
ZANO SIX: Shandisa The Bathrooms On The Train
Kuti aponese zvose nguva uye mari edza uye kushandisa ichi Easy Tips kuti Train uye kushandisa muzvimbudzi muchitima kusiyana vachishandisa ndivo pachiteshi. The chitima zvimbuzi zviri makhiriniki panoperera motokari uye kazhinji yakachena zvikuru kupfuura zvimbuzi pa nhepfenyuro, uyewo kuva akasununguka.
Venice kuRoma Zvitima
ZANO ZVINOMWE: Talk to Locals and Other Travelers
muromo 7 kubva Top yedu 10 Easy Tips nokuti Train akatasva Smart, Ndeipi nani nzira kudzidza pamusoro guta kana nyika pane nokutaura zvimwe zvayo veko, kana zvimwe vafambi angangodaro kunzvimbo kwaunoenda? Vachakwanisa kukuudzai dzi uye outs yako rwendo uye mazano pane zvokuita uye chii kuita. Edza kupwanya aizi nokubvunza mubvunzo, chipiriso chinonhuhwira kana kuratidza chinhu kubva yekwako.
Milan kuna Levanto Zvitima
Milan kuna La Spezia Zvitima
Siena kuna La Spezia Zvitima
Siena kuna Levanto Zvitima
ZANO MASERE: Takurai tudyo
Vatariri ndiro basa nzara uye ungada zvokurongedza chimwe chinhu tudyo pamusoro kana iwe uri chitima. Unogona Stock pasi vaunofarira zvokudya pane Supermarket yomunharaunda kana deli kana kushanyira waini dura usati kusvetukira muchitima; vakawanda chitima dzemapurisa vane pane rimwe izvi. The Zvokudya zvakabayirwa pamusoro nezvitima Kazhinji safarira uye anodhura kana uri kubhadhara nokuti vomuzana kirasi chigaro.
Zurich kuna Innsbruck Zvitima
Salzburg kuna Innsbruck Zvitima
Vienna kuna Innsbruck Zvitima
KuCologne Innsbruck Zvitima
ZANO mipfumbamwe: Ziva Where To Get Off
Ziva iyo chiteshi ndechimwe zvinokosha Easy Tips kuti Train kufamba. Kana wasvikapo muguta unogona kumira pa Suburban nhepfenyuro dzakawanda nezviratidzo achiratidza zita raMwari wako kuenda uye zita nharaunda, asi regai tauka kure kusvikira wasvika nechepakati yemapurisa. nguva dzose Unogona kukumbira vamwe vanhu kana tarisa rinotungamirira kuti uwane rubatsiro.
Hamburg kuna Copenhagen Zvitima
Hanover kuna Copenhagen Zvitima
Berlin kuna Copenhagen Zvitima
ZANO GUMI: Nguva dzose Rangarirai Local Train Etiquette
Cherechedza kuti vamwe yako muchitima motokari kuita. Kana vari anyarara, kuva nechokwadi kutevera suit. Chenjererai zviratidzo kuti zvingaratidza kuti uri vagere akasarudzwa motokari yakanyarara apo vanhu vanouya kurara kana basa. Hazvinei kupi imi vagere, musaedza kuva loudest munhu ari pedyo. Iva nechokwadi kwete kuzorora tsoka dzenyu pachigaro mhiri iwewo, kunze kwekunge uinazvo shangu dzako kure.
Kana iwe yeuka izvi Top 10 Easy Tips nokuti Train akatasva Smart isu hunovimbisa uve Super rwendo uye kunopindirana ruzivo rukuru. Ungadaro kunyange kusangana vamwe veko itsva uye kuti dzimwe shamwari itsva! Anything zvinogoneka kana totaura nokudzidziswa pakufamba. Kamwe waita nyanzvi izvi, Saka funga Bernina Express uye zvakawanda!
– Kana iwe aifarira yedu pambiru musi Top 10 Easy Tips nokuti Train akatasva Smart, inzwa wakasununguka vamwe, tine mabhatani yokuitawo chete pazasi ichi Blog romukova.
Akagadzirira kutora chitima kukwira? Book chigaro chako uye hazvitsivi chero Réservation yechikoro nenguva – www.saveatrain.com
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-10-easy-tips-for-train-riding-smart%2F - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / kuti / of kana / kuti ru uye mimwe mitauro.
mazano traintip Train Travel